Huawei သည်သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်အထိသုံးလကြာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် Androidsis
Huawei ၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ကြားမှအတော်လေးအံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုအချက်ကိုယခု သင့်ကို Android အသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ထားသည်ဒါကိုအတိုချုပ်ပြောရရင်တရုတ်ကုမ္ပဏီအပေါ်ရေအေးတစ်ပုံးလိုကျသွားတယ်။
ဤအချက်သည် Huawei ကိုရည်ညွှန်းသောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Donald Trump မှတရုတ်အစိုးရသို့သွားသောလမ်းနှင့်တူသည်။ သို့သော် Huawei သည်ဤသုံးလပတ်အတွင်း (သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်အထိ) ၃ လအနားယူနိုင်ခဲ့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသူ့ကိုဤအချိန်ကိုယာယီလိုင်စင်ဖြင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည် ၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးနှင့်ပါမစ်နှင့်အတူဆက်လက်ရန်။
Huawei သည်သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်အထိယာယီလည်ပတ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိခဲ့သည်
Huawei ကိုအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအဖွဲ့ငယ်တစ်ခုပေးထားတယ်အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း ၀ ယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနသည်လက်ရှိ Huawei ၏လက်ကိုင်ဖုန်းများနှင့်လက်ရှိကွန်ယက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် software မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်ရန်အတွက်အမေရိကန်လုပ်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ကြိုးစီးပေါ်မှာတစ်ခုခု.
သို့တိုင်ဤတိုင်းတာမှုတွင် Huawei သည်လိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲပစ္စည်းကိရိယာအသစ်များအတွက်အမေရိကန်ကုန်ထုတ်လုပ်သူများထံမှအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်နိုင်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ။ သို့သော်လည်း၊ သင်၌ရှိပြီးသားသူများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်သည်အမေရိကန်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကွဲပြားသောပစ္စည်းများကိုဆက်လက်ညှိနှိုင်းနိုင်သည်.
အမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှ ၀ န်ကြီး Wilbur Ross မှပြောကြားခဲ့သည် ဤအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို Huawei အားလက်ကမ်းစာစောင်အဖြစ်မဖော်ပြထားပါ။ သူ့ဟာသူ Huawei ပစ္စည်းကိရိယာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပံ့ပိုးသူများကိုချိန်ညှိမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်တရုတ်ကုမ္ပဏီကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုမီအခြားရွေးချယ်စရာများရှာဖွေရန်အချိန်ပေးသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူအမေရိကန်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာနမှရှေ့နေနှင့်အရာရှိဟောင်း Kevin Wolf ကပြောကြားခဲ့သည် ရိုက်တာသတင်းဌာန လာမည့်:
Huawei ၏ပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်စနစ်များကို အသုံးပြု၍ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များအားမရည်ရွယ်ဘဲသက်ရောက်မှုများကိုကန့်သတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ သူတို့ဟာကွန်ရက်ပြတ်တောက်မှုကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားနေပုံရတယ်။ "
ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာ၊ Huawei သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်ဒီတစ်ကြိမ်လုံးလုပ်ခဲ့သလိုပဲ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် devices များသို့ updates များကိုဆက်လက်ပေးပို့ပြီး Google နှင့် Qualcomm နှင့် Intel ကဲ့သို့သောအခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်ဆံရေးရှိလိမ့်မည်။
အများပြည်သူဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သောလိုင်စင်သည်အမေရိကန်ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူခြင်းအတွက် Huawei Technologies Co. , Ltd. ကိုအမေရိကန်အစိုးရမှပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကချမှတ်ခဲ့သောကန့်သတ်ချက်များကိုလျော့နည်းစေသည်။ "
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei နှင့်သုံးလကြာအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး
Xiaomi Mi MIX35G သည်စပိန်သို့တရားဝင်ရောက်ရှိလာသည်
အချို့သော Google Pixel 3a နှင့် 3a XL သည်ပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်ပြproblemsနာများရှိနေသည်